minthantzaww: သတင်းကြေငြာစဉ် လက်ခလယ် ထောင်ပြမှုကြောင့် ရုရှ သတင်း ကြေငြာသူ အလုပ်ဖြုတ်ခံရ
သတင်းကြေငြာစဉ် လက်ခလယ် ထောင်ပြမှုကြောင့် ရုရှ သတင်း ကြေငြာသူ အလုပ်ဖြုတ်ခံရ
ရုရှားရုပ်မြင်သံကြား သတင်းကြေငြာသူ ပျိုဖြူလေး တစ်ယောက်တော့ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့က သတင်းဖတ်ရင်း အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကို ရည်ရွယ်တဲ့ သဘောနဲ့လက်ခလယ်လေး ထောင်ပြလိုက်မိလို့ ဟိုးလေးတကြော်ကြော် ဖြစ်ပြီး အလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားရုပ်မြင်သံကြား REN TV ရဲ့ သတင်းကြေငြာသူ တတ်ယာနာ လီမန်နိုဗာဟာ ဒီလ အစောပိုင်းက သတင်းရုပ်သံလွှင့်နေတာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်ကလေး တကောင်လိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကတော့ အင်တာနက် ဝဒ်ဆိုဒ်တွေပေါ်မှာ ဗိုင်းရပ်ပိုးတကောင် အဖြစ်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်လို့လန်ဒန် နေ့ စဉ် တယ်လီဂရဖ် သတင်းစာက ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ အခြေအနေ တင်းမာမှုက သူမကို ရုပ်မြင်သံကြားဌာနက အလုပ်ဖြုတ်ဖို့ ဖန်တီးလာပါတယ်။
တတ်ယာနာ လီမန်နိုဗာဟာ ရုရှားရုပ်မြင်သံကြားမှာ သတင်းကြေငြာသူအဖြစ် ဆက်ပြီး လုပ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘုး။ လုပ်ရလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ သတင်းရုပ်သံလွှင့်ချက်ကတော့ အာရှပစိဖိတ် ပူးပေါင်းရေးအသင်းကြီးရဲ့ ဥက္ကဌရာထူးကို အလှည့်ကျ တာဝန်ယူရာမှာ၊ ရုရှားသမ္မတ ဒမစ်ထရီ မက်ဗီဒက်က အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကို အစားထိုး နေရာယူမှာဖြစ်ကြောင်း ထုတ်လွှင့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ နံမည်ကို ပြောတဲ့အခါ ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းစာနယ်ဇင်းဆုတွေ ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တတ်ယာနာ လီမန်နိုဗာက အင်မတန်ရိုင်းတဲ့ သကေတဖြစ်တဲ့ လက်ခလယ် လက်ချောင်းကို ထောင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီရုရှားရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ကို ရုရှားတပြည်လုံးက ကြည့်ရှုသူ သန်း ၁၂ဝ ကျော်ရှိပါတယ်။
သူမထင်တာက ဒီနေရာမှာ သတင်းဆိုင်ရာ အရုပ်နဲ့သုမရဲ့ အသံကိုသာ လွှင့်နေတယ်၊ သူမဟာ ကင်မရာရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ မရှိဘူးလို့ ထင်ပြီး၊ စောစောပိုင်းက သုမကို နောက်ပြောင်ထားတဲ့ စတူဒီယို ခန်းမထဲက စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေကို ရည်ရွယ်ပြီး လက်ခလယ် လက်ချောင်းကို ထောင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ ရိုက်ကူးထားချက်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ သတင်းကြေငြာသူ တတ်ယာနာ လီမန်နိုဗာဟာ သုမရဲ့ ပဟေဠိဆန်တဲ့ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်သတင်းကို ဖတ်လွှင့်နေဆဲမှာ ကင်မရာကို ကြည့်နေတာ တွေ့ ရပါတယ်။
Copy From : http://patheincity.com
Posted by minthantzaww at 09:06
သင်အားနာတတ်ပါသလား( မကောင်းသော အားနာခြင်းမျိုးများ)...
Do you Know? လွယ်ကူ ပေါ့ပါး နည်းလမ်းများ
ကမ္ဘာ့အကျော်အမော် တရုတ် အားကစားသမားများ
အဖေဝလျှင် သားသမီးများ ဝနိုင် ၊ အမေ ဝ သော်လည်း သားသ...
ရမ်ဘိုမင်းသားစတားလုံး (သို့မဟုတ်) ရည်မှန်းချက်ကြီး...
သတင်းကြေငြာစဉ် လက်ခလယ် ထောင်ပြမှုကြောင့် ရုရှ သတင်း...
ခန္ဓာကိုယ် တစ်ပိုင်းပြတ် လူသား
ကျန်းမာနေသော အမျိုးသားတို့၏ လက္ခဏာ (၅)ရပ်
အနာဂတ် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို ရိုဘော့များ သိမ်းပိုက...
ယောက်ျားပီးပီသသ သန့်ပြန့်ချောမောလှတဲ့ ကမ္ဘာ့အခန့်ညာ...
Taylor Swift lookalike got beaten by bullies who e...
ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ
ခါးထက်ပိုင်း ဗလာကျင်း နေသည့် ပုံ ကို ဖော်ပြသည့် Cl...
XP Talk တစ်ခုဖန်တီးကြည့်ချင် ရင်
တင်ပါး ခွဲစိတ် မှုခံယူ အပြီး ရွှေဘီး တပ်ကုလား ထိုင် ...
ယောင်္ကျားလျာနဲ့ မိန်းမလျာ လင်မယား ဘယ်လို စခန်းသွားလ...
တရုတ်ပြည်မတွင် ချမ်းသာသူတို့က လူငှား၍ ပြစ်ဒဏ်ကျခံေ...
The top 20 most-hated celebrities in Hollywood.
Top 10 Hollywood hottest moms (29 pics)
You gotta see the 'Ten Thousand People Bikini Show...
Japanese Model, Vanilla Chamu, Spent over $100K on...
WHOAA the human body is so amazing! (23 pics)
star model တွေ၇ဲ့ sexy ဒီဇိုင်း
Former Disney star Selena Gomez ditches her good g...
အချစ်အတွက် မိမိကိုယ်မိမိ မီးရှို့သူ
ထိုင်းတောင်ပိုင်း နာရာသီဝတ်တွင် ကားဗုံးပေါက်ကွဲမှု ...
အတွင်းခံ အင်္ကျီကို ဖွင့်ဟ ပြသခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ် အမျိုး...
ရန်ကုန်တိုင်း၌ အဓမ္မကျင့်မှု သုံးရက်လျှင် တကြိမ်၊ ကေ...